गृहमन्त्रीको आँखामा अझै जनयुद्ध
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्वाक्क भनिहाले– ‘नेपालको सेना सामन्ती हो ।’ नेपाली शान्ति प्रकृयाको अध्ययन गर्न आएको अफगानिस्तानको शान्ति परिषदको टोलीकै सामु गृहमन्त्री थापाले यस्तो तीतो टिप्पणी गरेका हुन् । यो टिप्पणीलाई प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले समेत कुनै टिप्पणी गरेनन् । के उनीहरुलाई यस्तो टिप्पणी पाच्य भएको हो र ? नेपाली सेना सामन्ती हो भने नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ, संविधान संशोधन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन, सेनाको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने नीति पनि बनाउन सक्छ, बनाए भयो त । विदेशीका सामु नेपाली सेनाका बारेमा यसरी तीतो टिप्पणी गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई कसले दियो ?
गृहमन्त्रीले नेपाली सेनाको सोच, संस्कार र संरचना नै ठिक छैन भनेका छन्, छैन भने ठिक पार्ने दायित्व अफगानीको कि नेपाल सरकारको ? नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीले यसरी बाइफाले टिप्पणी गरेर सेनाको मनोबल गिर्छ कि उठ्छ ?
सेनाभित्र कमजोरी होलान्, कतिपय सामन्ती प्रचलन पनि होला । त्यसलाई विदेशीका सामु धोती फुकालेर देखाउने होइन, सरकारका तर्फबाट सुधार्ने र नेपाली सेनालाई व्यवसायिक बनाउने हो । देशमा समस्या पर्‍यो कि बाटो बनाउनेदेखि पेट्रोल बेच्नेसम्मको काम सरकार लगाउँछ, अनि सेनाभित्र सामन्तीपन बढ्यो भन्छ, सामन्तीपन के के छ, त्यसलाई सरकारले तत्काल सुधार गरोस् ।
नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा कवच हो । राजनीतिले ध्वस्त पारेको राष्ट्रिय वातावरणले राष्ट्रका लागि खतरा बढ्दै गएको छ । यो खतरासँग कसरी लड्ने, लड्ने सरकारले हो, सक्दैन भने अन्य सुरक्षा निकायले हो र कसैले पनि सकेन भने आखिर लड्ने त सेनाले नै हो । त्यो सेनालाई बलियो पार्ने योजना ल्याउ ।
अफगान शान्ति मिसनले गृहमन्त्रीको कुरा सुनेर के सन्देश लिएर गयो होला, नेपाल अझै शान्तिमार्गमा छैन भन्ने सोच्यो कि सोचेन होला ? नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै नौलो हो, सबैले सह्राहना गरेका छन् । पीडितले न्याय र पीडकले दण्ड पाएपछि शान्ति प्रकृया पूर्ण हुन्छ । अफगानी हविवा सरावीको नेतृत्वको टोलीले सेना समायोजनदेखि संविधान निर्माणसम्मको जानकारी लिएको थियो ।